Umxholo: Inokujongeka njani i-iPad enesikrini esongelayo? | IPhone iindaba
Umxholo: Inokujongeka njani i-iPad enesikrini esongelayo?
Samsung Isenokubonelela ngokuskrinwa kwe-Apple ngokusekwe kwitekhnoloji efanayo njengeGold Fold. Iingxelo ezipapashiweyo ukuza kuthi ga ngoku azivezi zixhobo ze-Big Apple kude kube ngu-2020, kodwa asazi ukuba siphantsi koxinzelelo kwezinye iinkampani, iiprojekthi zinokukhawuleziswa.
Amarhe malunga nokufika kwesixhobo esinesikrini esongwayo enze abaqulunqi qala ukubonisa ukuba iyakuba yintoni isiphumo. Le yimeko yokunikezelwa kweLetsGoDigital, a I-iPad enesikrini sokusonga ikamva kwaye kwaye, ngokoluvo lwam, ayisiyonyani kakhulu. Kodwa kufuneka sihlale nokubaluleka kwalo mbandela: eyona nto iphambili apha.
I-iPad enesikrini esongelayo okanye i-iPhone enesikrini esongelayo?
Akukho nto icacileyo, kwaye akukho lwazi luvuzayo. Ekuphela kwento esiyaziyo kukuba umsebenzi wangasemva ukusonga iteknoloji yesikrini kubulela kupapasho lweepatent ezimbalwa. Oku akuthethi ukuba iApple ifuna ukumilisela isixhobo esinobu buchwephesha, kodwa iinjineli zayo zichithe ixesha ukubona indlela ezinokuthi zenziwe ngayo ezi mpawu. Isamsung iyazazi iinjongo zika-Apple kunye Ngendikunike iipaneli zayo ngetekhnoloji yokusonga.
Kungenxa yoko le nto iikhonsepthi zokuba i-iPad enesikrini esongwayo iya kuba njani sele iqalile ukuvela kumnatha. Kukho umbuzo wokuba ingaba yintoni esinokuyibona yi-iPad okanye i-iPhone. Kukho izibonelelo kunye nokungalunganga, kodwa into ecacileyo kukuba iApple isungule isixhobo kwezi mpawu Kuya kufuneka ibonise itywina elisemgangathweni.
Kule mbono ipapashwe yiLetsGoDigital sibona kuphela ukuba i-iPad enesikrini sokusonga ingabonakala njani. Umxholo ubonakalisa inyani indawo yokusebenza enokusongwa ukuze ibenokuphatheka ngokulula. Uluvo lolu hlobo lwetekhnoloji ukusebenziseka kunye nokusebenziseka, ke kuyakufuneka uthathe isigqibo sokuba ngaba eyona nto ingcono kukusonga i-iPhone okanye ukusonga i-iPad. Ngokoluvo lwam, ndicinga ukuba eyona nto ingcono kukukwazi ukusonga isikrini se-iPad ukuba sincinci kwaye sibe luncedo kwezinye iinkalo zobomi bemihla ngemihla.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Izaziso » Umxholo: Inokujongeka njani i-iPad enesikrini esongelayo?
Uyithumela njani imali ngeBizum
I-Galaxy S10: isivamvo esicothayo seminwe, ukuhleka kobuso